အရေပြားပေါ်က ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း အကွက်က စုန်းစုပ်တာ တဲ့လား ...... - Hello Sayarwon
အရေပြားပေါ်က ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း အကွက်က စုန်းစုပ်တာ တဲ့လား .........
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 21/12/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မနေ့ညက အိပ်တဲ့အထိ ဘာအကွက်မှ ရှိမနေပါဘူး။ မနက်နိုးတော့မှ တဆစ်ဆစ် နာတယ်ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ပေါင်မှာ အကွက်လိုက်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ခပ်ညိုညိုကြီး ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး။ သိလောက်မယ်ထင်တဲ့ သူတွေကို မေးကြည့်တော့လည်း စုန်းစုပ်တာ တဲ့။ စုန်းက ချစ်လို့ စုပ်တာ မုန်းရင် လုပ်တယ်။ ဘာမှ သွားမလုပ်နဲ့နော်။ ဒီအတိုင်းသာ ထားလိုက် သူ့ဘာသာ သူပျောက်သွားလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူလဲ သိချင်ရင်တော့ နနွင်းမှုန့်လေး လိမ်း ဒါမှမဟုတ်ရင် စကောကို သွေးလိမ်းထားလိုက် လုပ်ထားတဲ့ စုန်းက စကော လာငှားလိမ့်မယ်။ နနွင်း လာချေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေကို ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါက တကယ်လား ….. ယုံတမ်း စကား သက်သက်လား …… သိပ္ပံနည်းလမ်းကျကျ လေ့လာမှု ရလဒ်တွေကရော ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
အရေပြားပေါ်က ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း အကွက်က စုန်းစုပ်တာတဲ့လား ………
အရေပြားပေါ်မှာ ညက မရှိပါဘူး မနက်မှ ဖြစ်လာတာဆိုတဲ့ အညိုရောင် ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း အကွက်တွေက စုန်းစုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာပါ။
ဒီလို အညိုအမည်းကွက်တွေ ဖြစ်ရတာက တစ်ချက် မကပါဘူး။ အကြောင်းအရင်း အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို အတူတူဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား …….
အရေပြားမှာ ဘာကြောင့် အညိုအမည်း ဖြစ်ရတာလဲ …….
အရေပြားမှာ အညိုအမည်း ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက အရေပြားအောက်ဘက်မှာ သွေးတွေ စုသွားတာကြောင့်ပါ။ သေးငယ်တဲ့ ဆံချည်မျှင် သွေးကြောလေးတွေ ပျက်စီးတာကြောင့် အရေပြားမှာ အညိုအမည်း စွဲရတာပါ။
ဒီလို ဖြစ်တာကလည်း ပြုတ်ကျတာ၊ တစ်ခုခုကို အားနဲ့ ဝင်တိုက်မိတာ၊ အရေပြားပေါ်ကို ဝိတ်ပါတဲ့အရာ တစ်ခုခုက အရှိန်နဲ့ ကျလာတဲ့အခါမျိုးမှာ အရေပြားမှာ အညိုအမည်း စွဲနိုင်ပါတယ်။ အားပြင်းပြင်းနဲ့ ထိခိုက်မယ်မယ်ဆိုရင်တော့ အရိုးတွေအထိပါ ထိခိုက်နိုင်ပြီး အတွင်းပိုင်းထဲက သွေးယိုစီးတာမျိုးအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်မိတာကြောင့် အညိုအမည်းစွဲတာဆိုရင် ရက်သတ္တပတ် အတော်ကြာ ကုသရပေမယ့် သိပ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်တော့ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။
အညိုအမည်း စွဲတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို လူတိုင်း မှတ်မိမယ် ထင်လား ……
အညိုအမည်း စွဲတာက လူတိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရင်းကို သေချာ မှတ်မိသူက ရှားပါတယ်။ လူအများစုက အညိုအမည်း စွဲတဲ့အခါ အရေပြားမှာ အကွက်ပေါ်လာမှ သိတာဖြစ်သလို တဆစ်ဆစ် နာမှ သိကြတာ များပါတယ်။
အရေပြားပေါ်က ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း အကွက်က စုန်းစုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
အရေပြားပေါ်က ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း အညိုအမည်း အကွက်တွေက စုန်းစုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
အရေပြားမှာ အညိုအမည်းဖြစ်တာက မျိုးရိုး လိုက်တတ်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါ။ မိဘတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေထဲမှာ အညိုအမည်းစွဲတာ ဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အညိုအမည်း ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
သောက်သုံးနေရတဲ့ ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်း အရေပြားမှာ အညိုအမည်းအကွက်တွေ ဖြစ်လွယ်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အချို့သော ဆေးဝါးတွေက သွေးကျဲစေတာ၊ သွေးထွက် များစေတာတွေကြောင့် အရေပြားမှာ အညိုအမည်း စွဲတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အသက်အရွယ် ရလာတဲ့အခါ သွေးကြောတွေက အားနည်းလာသလို အရေပြားတွေကလည်း ပါးလာပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာလည်း အနည်းငယ် ထိခိုက်မိရုံနဲ့ အရေပြားမှာ အညိုအမဲ အကွက်တွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရက်အလွန်အကျွံ သောက်တာကလည်း အသည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ကျစေနိုင်သလို သွေးခဲနိုင်စွမ်း ကျစေပြီး အရေပြားမှာ အညိုအမည်းစွဲတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အသည်းရောဂါတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အသည်းခြောက်တာ၊ အသည်းမှာ အမာရွတ်ဆဲလ်တွေ များတာ၊ အသည်းက သွေးတိတ်စေတဲ့ပရိုတင်းတွေကို လုံလောက်အောင် မထုတ်နိုင်တော့တဲ့အခါမျိုးမှာ အရေပြားမှာ အညိုအမည်းတွေ ဖြစ်တာ အကွက်ဖြစ်တာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးပြဿနာ တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် သွေးကျဲတာ၊ သွေးခဲနှေးတာမျိုး ခံစားရတဲ့အခါမျိုးမှာ သွေးထွက်တာ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ခံစားရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း အရေပြားမှာ အညိုအမည်း စွဲတာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အချို့သော ဗီတာမင်တွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနာကျက်စေဖို့နဲ့ သွေးခဲစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗီတာမင် C ချို့တဲ့တဲ့အခါ သွားဖုံး သွေးယိုတာ၊ အနာမကျက်တာ၊ အညိုအမည်း စွဲလွယ်တာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင် K နည်းတာကလည်း သွေးမြန်မြန် တိတ်အောင် သွေးခဲစေဖို့ အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သွေးကြောတွေ ရောင်ရမ်းခြင်း (Vasculitis)
သွေးကြောတွေ ရောင်တာကို ခံစားရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း သွေးထွက် များတာ၊ အညိုအမဲ စွဲတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သွေးကြောတွေ ရောင်ရမ်းခြင်း (Vasculitis) ကိုခံစားရတဲ့အခါ အသက်ရှူတာ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်တာ၊ ခြေလက်တွေ ထုံကျဉ်တာ၊ ပါးစပ်ထဲမှာ အနာဖြစ်တာ၊ အရေပြားမှာ အထုအပိမ့်တွေ ဖြစ်တာ၊ အရေပြားပေါ်မှာ ခရမ်းရောင် အကွက်တွေ ဖြစ်တာမျိုးကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်မှာ အညိုအမည်း အကွက်တွေ ဖြစ်တာက တစ်ခါတလေမှာ ကင်ဆာရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ရပ် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကင်ဆာထဲမှာမှ သွေးကင်ဆာလိုမျိုး ကင်ဆာ အမျိုးအစားက သွေးတွေနဲ့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ……. အရေပြားမှာ ဖြစ်တဲ့ အညိုအမည်းစွဲတာက စုန်းစုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလို ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြောင့်ပါ။
What to know about bruising easily https://www.medicalnewstoday.com/articles/325525 Accessed Date2December 2021
Liver Spots https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21723-liver-spots Accessed Date2December 2021
Symptoms of Hepatitis C on Skin, Hair, and Nails https://www.webmd.com/hepatitis/hepatitis-c-skin-problems Accessed Date2December 2021